Sandals Resorts International waxay xustaa aasaasihii Gordon "Butch" Stewart
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Sandals Resorts International wuxuu xusayaa aasaasaha Gordon "Butch" Stewart
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sandals Resorts International wuxuu xusayaa aasaasaha Gordon "Butch" Stewart
Si loo maamuuso Aasaasihii Sandals Resorts International iyo Guddoomiyihii soo daahay, dhammaan Sandals Resorts iyo Resorts Beach waxay si sharaf leh u soo bandhigi doonaan sawirka Hon. Gordon "Butch" Stewart oo ah xuska dhaxalkiisa weligiis ah.
Sandals Resorts International (SRI) waxay xusi doontaa noloshii aasaasihii iyo gudoomiyihii Gordon “Butch” Stewart taxane ah oo ku saabsan hantida iyo dhacdooyinka dhijitaalka ah ee loo qabtay in lagu maamuuso Mr. Stewart dhalashadiisii ​​6-dii July.
Dalxiisyada Sandals waxay ku dhawaaqayaan qorshayaal loogu talagalay in lagu sharfo aasaasaha dhalashadiisa 6da Luulyo.
"Badbaadinta Badweynta" waxaa lagu soo bandhigi doonaa goob kasta oo loo dalxiis tago iyada oo leh aragtiyo layaableh oo lagu xusayo Hon. Gordon “Butch” Stewart jacaylka badda.
Goob kasta oo loo dalxiis tago waxay sidoo kale heli doontaa sawir qaas ah oo aasaasi ah oo martida, xubnaha kooxda, iyo booqdayaashu arki karaan.
Hantida, goob kasta oo loo dalxiis tago waxaa loo soo bandhigi doonaa sawir qaas ah oo aasaasi ah kaas oo lagu soo bandhigi doono meel caan ah oo ay ku daawadaan martida, xubnaha kooxda, iyo booqdayaasha. Intaas waxaa sii dheer, goob kasta oo dalxiis ayaa soo bandhigi doonta Lookout Badweynta, Meel caan ah oo huteel kasta laga aqoonsaday oo gaar u ahaa Mudane Stewart aragtideeda cajiibka ah ee badda. Mid kasta Lookout Badweynta waxaa la socon doona huubo ay ku qoran tahay qormada soo socota: “'Fikirkeyga raaxada waxaa leh badda… '-Gordon “Butch” Stewart, Aasaasaha, Goobaha Kabaha Sandals. Sidii ay u ahayd aasaasihiiyagii, Caribbean-ku ha u noqdaan il aan dhammaad lahayn oo dhiirrigelin, nabad iyo farxad saafi ah. ”
Sandals Resorts International waxay daaha ka rogi doontaa "Badbaadinta Badweynta" meel kasta oo ka mid ah dalxiisyadeeda ku baahsan Caribbean-ka - oo ah aag gaar ah oo leh aragtiyo layaableh - si loogu xuso Hon Gordon “Butch” Stewart jacaylka badda. Sawirka Halkan: Aragtida badda ee aan dhammaadka lahayn ee Sandals Ochi Beach Resort oo ku taal Ocho Rios, Jamaica, oo u dhow halka Gordon "Butch" Stewart ku koray.
"Kuwani waa habab yar oo lagu sharfo waxyaabo waaweyn oo muhiim u ahaa aabbahay," ayuu yiri guddoomiyaha fulinta SRI Adam Stewart. “Sawirka aabbahay, oo si sharaf leh loogu sharraxo goobaha dalxiiskeenna, waa muhiim. Waxay muujineysaa adduunka in gadaasheena sumadaha, waxaan nahay qoys jiil lixaad ah oo Jamaican ah oo leh xididdo si adag ugu xidhan Kariibiyaanka. Waa sababta loo aasaasay meel leh aragtiyo qurux badan oo ku saabsan badda ayaa muhiimad weyn lahayd. Wax kasta oo aan qabanno waxay ka bilaabmaan meeshii ay baddu kula kulanto ciidda. Ka baxsan ahaanshaha hoggaamiye dalxiis, aabbahay wuxuu ku koray xeeb wuxuuna ku riyaaqay waxyaabaha fudud ee nolosha. Wuxuu jeclaa in badda lagu hareereeyo, asxaabta lala sheekeysto lana ciyaaro domino. Qoyska iyo Kariibiyaanka waa cidda aan nahay, waana na siiyay taas. Xaqiiqdii, mid ka mid ah shucuurtiisa uu ugu jeclaa waxay ahayd 'inuu doonayo martideena inay dareemaan inay reer yihiin markay nala joogaan.' Maanta, waxaan waqtigan u qaadaneynaa inaan u dabaaldegno isaga oo aan sharfeyno sida qoto dheer ee uu u tebay, ayuu yiri Stewart.
Kuwa soo raaca sumadaha kanaalka dhijitaalka ah waxay fursad u heli doonaan inay fikradahooda ka maqlaan Gordon "Butch" Stewart oo ereyadiisa ah oo ay wax badan ka bartaan noloshiisa iyagoo booqanaya "Xusuusashada Gordon "Butch" Stewart, bog internet ah oo loogu dabaaldegayo sheekooyinka, saameynta iyo xusuusta hiigsigan runta ah.
Dalxiisyada Sandals offers waxay bixiyaan laba qof oo jacayl ugu jacayl badan, waayo-aragnimada fasaxa ee raaxada ee Kareebiyaanka.
Iyadoo leh 15 goobo xeebeed oo qurux badan Jamaica, Antigua, Saint Lucia, Bahamas, Barbados, Grenada, iyo 16th Goobta u imaanaysa Curacao Guga 2022, Goobaha Dalxiis ee Sandals waxay bixisaa ka-saarisyo tayo ka badan shirkadaha kale ee dalxiis ee meeraha ku yaal.
Saxiixa Jacaylka Nest Butler Suites® ee ugu dambeeya asturnaanta iyo adeegga; kalkaaliyeyaal ay tababareen Guild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 5-Star Global Gourmet ™ cuntada, hubinta khamriga-shelf-sare, khamri qaali ah, iyo maqaayado qaas ah oo qaali ah; Xarumaha Aqua oo leh aqoonsi iyo tababar khabiir ah PADI®; dhakhso Wi-Fi laga bilaabo xeebta illaa qolka jiifka iyo Kabaha kabaha ee Aroosyada Lahabeyn karo dhammaantood waa kuwo gaar loo leeyahay.
Dalxiisyada Sandals waxay u dammaanad qaadayaan martida nabadgelyo maskaxeed laga bilaabo imaatinka iyo bixitaanka Borotokoollada Platinum Sandals ee Nadaafadda, talaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee shirkada kor loogu qaaday ee loogu talagalay inay martida siiso kalsoonida ugu weyn markay ku nasanayaan Kariibiyaanka.
Dalxiisyada Sandals waa qeyb ka mid ah qoysaska iska leh Goobaha Sandals International (SRI), oo uu aasaasay Gordon “Butch” Stewart, oo ay ku jiraan Xeebaha Dalxiisyada iyo waa shirkadda hoggaamineed ee dhammaan dalxiisyada Caribbean-ka. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Sandals Resorts Luxury Included® farqiga u dhexeeya, booqo www.sandals.com.